» विवादमा सुपरस्टार रजनीकान्त : किन गर्यो गिरफ्तारको माग ?
विवादमा सुपरस्टार रजनीकान्त : किन गर्यो गिरफ्तारको माग ?
१६ माघ २०७६, बिहीबार २२:५८
भारतीय सुपरस्टार रजनीकान्त डिस्कभरि च्यानलको चर्चित शो ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ को सुटिङ्गका कारण चर्चामा आएका छन्।
बियर ग्रिल्सले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी भएका थिए। यो शोमा सुपरस्टार रजनीकान्त पनि देखिँदै थिए।
रजनीकान्तले यो एपिसोडको सुटिङ्ग कर्नाटकको बन्दीपुर नेशनल पार्कमा भएको थियो। यो कुरा केही अभियन्ताका लागि मन परिरहेको थिएन। उनीहरुले रजनीकान्तको सुटिङ्गमाथि आपत्ति व्यक्त गर्दै उनलाई चाँडो पक्राउ गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।